हतास र उदास मानसिकतामा कक्षा १२ का परीक्षार्थी, अब कहिले हुन्छ परीक्षा ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
हतास र उदास मानसिकतामा कक्षा १२ का परीक्षार्थी, अब कहिले हुन्छ परीक्षा ? (भिडियो)
काठमाडौं । कोरोना महामारीले फेरि एकपटक सबै क्षेत्र तहसनहस पार्न खोज्दैछ । अर्थतन्त्रलाई आघात पारिसकेको कोरोनाले गरीबको गाँस मात्र होइन धेरैको सास पनि खोसिसकेको छ । सम्भावित तेस्रो लहरको चेतावनीसंगै देखिन थालेको संकेतले अब थप कस्तो तवाह मच्चाउने हो ? त्रास बढ्दो छ । तर सतर्कता र तयारी कमजोर छ । जताततै लापरवाही र हेलचेक्रयाईको पराकाष्ठा छ । तर, सचेतना अपनाइएको क्षेत्रमा पनि मारमा एक थरी विद्यार्थीहरु मात्र परेका छन् । यो सतर्कता अपनाइदा पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरि परीक्षा रद्ध गरिएको छ त्यो पनि कक्षा १२ को मात्र ।
दुई दुई पटक स्थगित गरियो कक्षा १२ को परीक्षा । यसपटक पनि स्थगित हुँदा विद्यार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको त कुरै छोडौं । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यहाँ प्रश्न उठाउन किन मिल्यो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका बिभिन्न संकायका परीक्षाहरु धमाधम भइरहेका छन् । कक्षा ११ को पनि भयो र भइररहेको छ ।
कोरोना महामारीका बीच नै चिकित्सा शास्त्रदेखि विभिन्न तहका परीक्षा धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । अध्याधिक विद्यार्थी संख्या रहेको तीन र चारवर्षे बिएस्सी, बीबीएस, बीएड र बीए प्रथम वर्षको परीक्षा पनि भइरहेको छ । यस्तै स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा पनि भइरहेको छ । तर कक्षा १२ का परीक्षार्थीमाथि अन्याय किन ? यो प्रश्नले अहिले देशभर स्थान पाउन थालेको छ । जताततै गतिविधि खुल्ला छ । सडकमा मानिस र सवारी साधनको चाप छ । तर कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई मात्र निषेध किन ?
पहिला ज्यान बचाउ अनि परीक्षा । यो नारा लगाउनेहरुले किन १२ कक्षाका विद्यार्थीको ज्यान र जीवनलाई मात्र महत्वमा राखे । हुनत महामारीमा सजग र सतर्क रहनु पर्छ । सबै गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनै पर्छ । तर यहाँ हामीले उठाउन खोजेको विषय १२ का विद्यार्थी मात्र किन अन्यायमा परे भन्ने हो ।
धेरैलाई उच्च अध्ययनका लागि विदेश जानु छ । देश भित्र पनि ब्याचलर तहको अध्ययनका लागि आधार कक्षा १२ नै हो । र, कक्षा १२ को परीक्षा लिदा उनीहरुको शैक्षिक सत्र खेर नजाने मात्र होइन । कक्षा ११ मा भर्ना हुन तयार रहेका १० लाख बढी विद्यार्थीले समेत राहत पाउनेछन् । तर कक्षा १२ को परीक्षा बारम्बार स्थगित हुँदा ती तमाम विद्यार्थीहरु निरन्तर मारमा परेको तर्फ अब ध्यान दिने कि नदिने ?
विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो । विकल्पविहीन कुनै पनि क्षेत्र नै हुँदैन । बिभिन्न विधिहरु लागू गर्न सकिन्थ्यो । सबै विद्यालयहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । विद्यार्थीलाई अनलाइन र फोनबाट पनि प्रश्न सोध्न सकिन्थ्यो । दोहोरो विश्वास कायम हुने गरि छोटो परीक्षाहरु लिन सकिन्थ्यो । तर कुनै पनि विकल्पमा वहस समेत नगरि सोझै परीक्षा स्थगित गरियो । अझै पनि नसोचिए यस्को असर शिक्षा क्षेत्रमा दशौं बर्षसम्म पर्ने निश्चित छ ।
विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त नै हुनेछ । कक्षा १२ को परीक्षा गत जेठमा नै हुनु पर्ने हो तर त्यतिखेर पनि कोरोनालाई देखाएर साउनमा सारियो । र, साउन ३१ गते हुने भनिएको परीक्षा अब कहिले हुने हो अनिश्चित बन्दा विद्यार्थीहरु कुहिरोको काग बनाइएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाका लागि ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी तयार थिए र छन् । तर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप सास्ती दिदै परीक्षा अन्योलको भूमरिमा पारिएको छ ।
एसईई परीक्षाको परीक्षाफल केही दिन अघि प्रकाशित गरियो । कोरोना महामारीलाई लिएर स्थगित परीक्षाको परीक्षाफलमा देखिएको त्रुटि,कमजोरीसहित आलोचनाको शिकार हुने पालो अब कक्षा १२ को देखिदैछ । एसइई परीक्षाको नतिजामा आफ्नो हात जगन्नाथ नै गरियो । यही देखेका अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविद्हरु चिन्ता गर्न थालेका छन् – अब नेपालको शैक्षिक अवस्था कोरोनालाई देखाएर कता मोडिने हो ?
हुन पनि नेपालका सिकाई, बुझाई तथा ज्ञान आर्जन भन्दा परीक्षालाई नै महत्व दिने परिपाटी परम्परा नै बनेको छ । पढाई भन्दा ठूलो परीक्षा हो नेपालमा । परीक्षा र नतिजालाई नै ठूलो मान्ने संस्कार र परम्परा समाजमा विकसित र स्थापित हुँदा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परीक्षा नै रोज्ने परिपाटी हुर्किएको छ । विद्यार्थी र अभिभावक पनि परीक्षा नगरिकन कक्षा चढाइयो हुने मञ्जुर कहिल्यै हुँदैनन । त्यसै पनि कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा विद्यार्थीहरुले अब भौतिक उपस्थितिमा नै हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा पाठ पढाएकै छ । तर शिक्षा क्षेत्र पारेको असरका बारेमा भने दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पार्ने गरि छलफल र बहस नै भएनन् । हलुकारुपमा लिइएको शिक्षा क्षेत्रका लागि भने यो महंगो पर्ने निश्चित छ ।